Kubadda Somali Sport Portal > News > Handball
Waxaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden ku geeriyooday shaksi qaali ku ahaa umadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaana bahweynta Isboortiga Ibraahim Cilmi Bulaale oo loo yiqiin Ibraahim XISBIYO. Ibraahim Xisbiyo wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed kuna lahaa qiimo weyn kana soo qayb qaatay adeega difaaca dalkiisa oo ah hawl sharaf badan. Markii laysku daray kooxihii Boliiska iyo Xooga oo la abuuray naadiga Horseed ayaa gudoomiye waxaa u noqday Ibraahim Xisbiyo intii u dhexeysey 1972 -1980.
Maamulka naadiga Heegan ayaa Maqaayadda weyn ee LIDO SEA FOOD Casho Sharaf lagu maamuusayo guulaha ay ciyaarta Kubadda Gacanta ka soo hoyeen wiilasha iyo gabdhaha kooxda Heegan ku qabtay, iyadoo ay ka soo qeybgaleen mas`uuliyiinta GOS , Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska , Ciyaartoy iyo Marti Sharaf kala duwan. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Xoghayaha guud ee naadiga Heegan Mustaf C/Casiis Maxamed oo ka dhawaajiyay in guulaha kooxda heegan aysan ku imaan si fudud wuxuuna tilmaamay isku xirnaanta iyo kartida ay muujiyeen ciyaartoyda iyo maamulka sare oo kaashanaya Taliyaha Akadeemiyadda ay suragashay inay ku talaabsadaan guulo is xiga.
Garoonka 1da Luulyo (Ex-Lugino) ee Magaalada Muqdisho ayaa ciyaartii kama dambeysta Horyaalka 13aad ee Kubadda Gacanta waxaa isku haleelay wiilasha Heegan iyo Dekedda, waxaana markii shanaad ee isku xiga koobka gacanta ku dhigay kooxda Heegan oo 17-15 ugu awood sheegatay kooxda Dekedda. Labadan Kooxood ee Heegan iyo Dekedda ayaa ah labada kooxood ee ugu awoodda weyn dhanka Kubadda Gacanta dalkeena waxaa ka dhaxeeya xafiiltan ciyaareed aad u heer sareeya, waxaana muuqanaysa markii ay kulmayaan inay ciyaarayaan kulan xirfad iyo xamaasad badan. Read more >>>
Garoonka 1da Luulyo (Ex-Lugino) ee Magaalada Muqdisho ayaa ciyaartii kama dambeysta Horyaalka 4aad ee Kubadda Gacanta waxaa isku haleelay gabdhaha Horeed iyo Heegan , waxaana si xarago leh markii afaraad koobka gacanta ugu dhigay kooxda Heegan oo 12-5 ugu awood sheegatay kooxda Horseed.
Waxaa ciyaar ka tirsan Horyaalka 4aad ee Kubadda Gacanta garoonka 1da Luulyo (Ex-Lugino) ee Magaalada Muqdisho isaga horyimid gabdhaha Horeed iyo Dekedda, waxaana guud ahaan muuqatay inay ku gacan sareeyeen Horseed oo goolal badan huwiyay gabdhihii Dekedda oo ay ku kala direen 14-4. Ciyaartan ayaa durba ku bilaabatay dardar xooggan ay la soo galeen Horseed oo goolal...